Masoivoho japoney: mifampiankina ny fitoniana sy ny fampandrosoana | NewsMada
Antoky ny fandrosoan’ny firenena ny fandriampahalemana ary, rehefa milamina ny tany, tsy voatohintohina ny toekaren’izao tontolo izao. Io ny fototry ny fiaraha-miasan’i Japon amin’i Madagasikara, araka ny nohamafisin’ny ambasadaoro japoney eto amintsika, i Ichiro Ogasawara, omaly teny amin’ny trano fonenany eny Ivandry.
Notanterahina, tamin’io fotoana io, ny fampahafantarana ireo endri-piaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta. Mifototra amin’ny antsoina hoe « Aide publique au développement » na APD izany. Notsiahivin’ny masoivoho fa nasiam-panavaozana io APD io ny taona 2013, ary napetraka ho satan’ny fiaraha-miasa ho an’ny fampandrosoana.
Matetika, ao an-tsain’ny sasany fa misy tambiny avokoa ny fanampiana avy amin’ireo firenen-dehibe. Araka ny hita ao anatin’ilay sata anefa, mifamatotra sy mifampiankina i Japon sy ireo firenena misandratra sy ireo an-dalam-pandrosoana, toa an’i Madagasikara.
Raha mirongatra ny tsy fitoniana aty amin’ny tany an-dalam-pandrosoana, hisy fiantraikany amin-dry zareo izany, araka ny voasoratra amin’ilay sata. Nomarihin’ny ambasadaoro fa tsy manana loharanon-karena voajanahary izy ireo. Miankina amin’ireo firenena manan-karena izany, toa an’i Madagasikara.
Antony hanamafisan’i Japon ny fanampiana sy ny fiaraha-miasa amintsika sy amin’i Afrika, amin’ny alalan’ny Ticad na ilay fivoriambe iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ity kaontinanta ity izany.
Mivelatra ny fanampiana mivantana amin’ny alalan’ny Jica
Endri-piaraha-miasa faharoa ny fanampiana mivantana, amin’ny lafiny efatra ary tanterahin’ny Jica. Maro ireo tetikasa momba ny fampandrosoana, toy ny Papriz, ao anatin’ny andiany faharoa, amin’izao fotoana izao.
Eo ny tetikasa momba ny fampiroboroboana ny toekarena, amin’ny alalan’ny fananganana fotodrafitrasa, toy ny seranan-tsambon’i Toamasina. Efa vita ny 30%-n’ny asa.
Manampy izany sosialy toy ny fanamboarana sekoly. Misy koa ny fandaharanasa fampiofanana ka efa nisitraka izany ny Malagasy miisa 1 070, hatramin’ny taona 2017.